Govecs GO! T3.6 – 🛵 လျှပ်စစ် Scooter 2020
ကို7kW (9.4 ကိုမြင်းကောင်ရေ)
အဆိုပါကို GO! T3.6 ထုတ်လုပ်မှုမရှိတော့ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ GOVECS GO! T3.6 နောက်ဆုံးပေါ်လီသီယမ်နည်းပညာနှင့်အတူတစ်ဦး high-performance ကိုလျှပ်စစ်ကုန်တင် / ပို့ဆောင်မှုမော်တာ Scooter ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ T3.6 ဆိုင်ကယ်အထူးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အသုံးပြုရန်နှင့် tradespersons အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့် 50 170 မှလီတာကုန်တင်သေတ္တာများနှင့်အတူရရှိနိုင်ကြသည်။ အဆိုပါ Scooter (ယာဉ်မောင်းဖယ်ထုတ်ပြီး) 180 ကီလိုဂရမ်တစ်ကုန်တင်အလေးချိန်ကိုသယ်ဆောင်ဖို့စွမ်းရည်ရှိပါတယ်။ 2017 အဘို့အနယူးအင်္ဂါရပ်များကိုသစ်တစ်ခု State-Of-The-Art BMZ ဘက်ထရီနှင့် updated ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (BMS) ဖြစ်ကြသည်။
Govecs အဆိုပါဘက်ထရီထိုကဲ့သို့သော T3.4 အဖြစ်ယခင်မော်ဒယ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် 45% သာ. ကြီးမြတ်အကွာအဝေးရှိသည် 2016 ၏နောက်ဆုံးမော်ဒယ်များအတွက်ဘက်ထရီ၏အကွာအဝေးကိုအာမခံ။ ဘက်ထရီဗလာဖြစ်နေသည်သည်အထိအသစ် accu ရဲ့ကိုလည်းစဉ်ဆက်မပြတ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေး။
အဆိုပါ T3.6 အနေနဲ့အဆင့်မြင့် brushless မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်လျှပ်စစ်7kW မော်တာစွမ်းအားဖြင့်နှင့်တစ်ဦးအနိမ့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုခါးပတ် drive ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလျှပ်စစ် Scooter ကတော့ Scooter နီးပါးမျှဆူညံသံထုတ်လုပ်ကြောင်းသေချာသည့်ခေတ်မီ drive ကိုရထားရှိပါတယ်။
Govecs ဟာ Scooter ရဲ့အရောင်များ / ပုံနှိပ် (ဓါတ်ပုံများကိုကြည့်ပါ) အပြည့်အဝစိတ်ကြိုက်ပေးထားပါတယ်။
အဆိုပါ Scooter ရဲ့ထိပ်မြန်နှုန်း / h 83 ကီလိုမီတာဖြစ်ပါတယ်။